Ningbo, Hangzhou, iri na abụọ president nke Chamber of Commerce ẹkenịmde a ọrụ nzukọ - China Yuyao Hengwei sooks mwekota
Na 16:00 na May 6, 2014, Ningbo, Hangzhou, iri na abụọ president nke Chamber of Commerce office nzukọ na Ningbo Investment Co., Ltd. LAN House, ga-telephoto Ming, osote onyeisi oche nke Feng Wei, Xie Guorong, Dongxu Ming , Bao Shili, na Board of nlegide Shenpei Rong, Secretary General Jiang LAN isonye.
(Coke onyeisi oche na nlezianya tụlee nke nzukọ sonyere ọmụma)
NZUKỌ onyeisi oche site ọnwa n'usoro president nke Dong Xuming, Dongxu Ming, osote onyeisi oche nke ụlọ ọrụ na azụmahịa mmepe nke ya mmeghe, n'ala LAN Investment Co., Ltd. bụ a azụmahịa ezigbo ala na ụlọ ego ọkachamara ego ụlọ ọrụ, ego ebe gụnyere ọkachamara ahịa, mepere emepe okụre, hotels, ụlọ, njem, ezigbo ala na ụlọ na ndị ọzọ na formats nke ezigbo ala na ụlọ mmepe na arụmọrụ. Specific iche nke ulo oru mbo, gụnyere ekesịpde, nkwonkwo ịmalite, na-ejide, hara nhatanha na ofu nloghachi investments. Ee LAN International ọla Lake City dabeere na square na ụbọchị agbamakwụkwọ, iwebata banyere 20 Hong Kong ọla Manufacturers 'isi òtù, dị ka mere na Hong Kong ịbanye Chile ọla ngosi, ahịa nke window na mwekota nke mba na anụ ụlọ ụdị na okomoko ọla akara maka banyere 10 n'ozuzu biri.
The Secretary-General Jiang LAN nchịkọta nke ọrụ na April na May ọrụ plan. Iji ike nkwurịta okwu njikọ otu nkeji, iji kwalite aku imekọ ihe ọnụ na mgbanwe n'etiti otu ụlọ ọrụ, agbam ume azụmahịa ngwa ngwa mmepe, na preparations maka nzukọ na May mbụ "so ụlọ ọrụ iji na-akwalite mmepe nke mgbanwe" ọrụ, ndị sonyere nke president nke ndị ọtụtụ ihe mere, screenings, dị ka otú ịzụlite ụlọ ọrụ na-atụle.
(Secretary-General Jiang LAN nchịkọta nke ọrụ na April na May Work Plan)
Na nzukọ, Chamber of Commerce na otú na-ebu ọrụ ebere na-eme ka inyocha, Dongxu Ming, onyeisi oche onyinye Charity Fund $ 10,000. Mgbe ahụ a na-amụ na-esi na-adọta J.Randall emepụta na Ningbo Hangzhou.
N'ikpeazụ, Coke, president nke April 19, karịa a usoro nke na-eme na-amata 姚大岚 obodo, na-ahazi na-eme ka a mata uru nchekwa mbụ. The osote onyeisi oche nke niile ka ha kwuo echiche ha, a afọ mgbe ọ chọrọ iji hazie a nloghachi Hangzhou home tours.